यी ३ शक्तिशाली राशिहरु जो जुनसुकै अवस्थामा पनि मान्दैनन् हार ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/यी ३ शक्तिशाली राशिहरु जो जुनसुकै अवस्थामा पनि मान्दैनन् हार !
यी ३ शक्तिशाली राशिहरु जो जुनसुकै अवस्थामा पनि मान्दैनन् हार !
हरेक मानिस आफुले गरिएको काममा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर सफल ति मान्छेहरु हुन्छन जोसंग निश्चित संकल्प र आत्मविश्वास हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार जसको कुण्डलीमा तीन ग्रह शुभ स्थितिमा रहने गर्दछन्, उनीहरुलाई कुनैपनि काममा निराशा प्राप्त हुदैन । पहिलो शुभ ग्रह हुन्छ शनि, यस ग्रहको कुण्डलीमा शुभ स्थितिमा भए भाग्यले सधै साथ दिने गर्दछ ।
मेष राशि हुने व्यक्ति आफ्नो नेतृत्व क्षमताको कारण सधै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहने गर्दछ। यी मानिसहरु आफ्नो बुद्धि कौशलता र आत्मविश्वासको बलमा हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन् । साथै यी व्यक्तिहरु राम्रो नेता र चर्चित वैज्ञानिक पनि हुने गर्छन ।
धनु राशि, जो आफ्नो हरेक काममा सफलता पाउनको लागी ठुलै क्रान्तिकारी निर्णय लिने गर्दछन् । यस राशिको मानिसहरु ठुलो भन्दा ठुलो निर्णय तुरुन्त नै लिने गर्दछन् । आफ्नो कामलाई सफल बनाउनको लागी ज्यान दिएर मिहिनेत गर्ने गर्दछन् । यस राशिको व्यक्तिहरु निकै नै अनुशासित हुने गर्दछन् । निश्चित समयमा नै आफ्नो काम पूरा गरि सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन ।
यो राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो क्षमताको कारण उच्च पद प्राप्त गर्नमा सफल हुने गर्छन्। शनि र मंगलको विशेष कृपा यस राशिको मानिसहरुमा रहने गर्दछन्। यस राशिको व्यक्तिहरु आफ्नो मिहिनेतको कारण धन, मान-सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नमा सफल हुने गर्छन् । यस राशिको व्यक्तिहरु जुन कामको पछाडि लाग्दछन् त्यसलाई पूरा गर्नको लागि पुरै मिहिनेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरुको यही खूबी सबैभन्दा ठुलो पूजी हुन्छ ।